အိမ်ထောင်ရှင်တွေအချင်းချင်း ဒေါသထွက်စိတ်ဆိုးစေတဲ့အကြောင်း | Radio Veritas Asia
ဒီနေ့မှာ တင်ပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေအချင်းချင်း ဒေါသထွက်စိတ်ဆိုးစေတဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။
ပရိသတ်ကြီးရှင့်၊ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ကိုယ့်အပေါ်စာနာ ထောက်ထားမှု မရှိခဲ့ရင်၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? သည်းမခံနိုင်ပဲ စိတ်ဆိုးမှာတော့ အမှန်ပါပဲ၊ တကယ်စဉ်းစား လိုက်ရင် Relationship ဆိုတာက ရှုပ်ထွေးခက်ခဲလွန်းလှပါတယ်။
Relationship မှာ စာနာထောက်ထားမှု မရှိဘူးဆိုတဲ့ဘက်မှာ နားလည်မှုလွဲတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Relationship မှာ အကျွမ်းတဝင် ရှိစေချင်ရင် ပိုပိုပြီးနီးစပ်ချင်ရင် ပိုပိုပြီးရင်းနှီးချင်ရင် တော့ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး မေတ္တာဂရုဏာ တရားကြီးကြီးမားမား ထားရတော့မှာပါ။
စုံတွဲတွေ ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ စကးများကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ကြည့်ရင်း ငွေရေး၊ ကြေးရေးကြောင့် Sex ကြောင့် In laws တွေကြောင့် အလုပ်ခွဲဝေလုပ်ကိုင်ရမှုတွေကြောင့် ဝင်ငွေနည်းလို့ မလောက်မငှလို့ Raising the kids ကြောင့် အဓိကမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါတွေက အိမ်ထောင်ရေးမှာ သာမာန်ကိစ္စရပ်လေးတွေပါ။
အဓိကက ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ကိုယ့်ကိုဂရုမစိုက်လို့ပါပဲ၊ ကိုယ့်ကိုဂရုမစိုက်ရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီ ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ တန်ဘိုးထားပြီး အဲဒီလိုအပေးရှိရင် လက်ပြန်ရချင်တဲ့ ဆန္ဒက ထုံးစံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လို့ ကိုယ့်ကို မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ မထားခဲ့ရင် ကိုယ့်အချစ်တွေကို စော်ကားသလို ခံစားရပြီး စိတ်ဆိုးတော့မှာပေါ့နော်။
တစ်ဘက်လုံး ဂရုဏာ၊ မေတ္တာလျော့ကလေ မိမိက ခါးသီးတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ဒေါသက အလိုအလျောက် ပိုပိုပြီးတိုးလာပါတယ်။ သာမာန် ပြဿနာလေးတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ ဖြေရှင်းလို့မရသလို ဖြစ်လာပါလေရော တကယ်လို့ အနှောင်အဖွဲ့တွေမရှိရင် ပိုကောင်းမှာပဲလို့ တွေးလာပါတော့တယ်၊ ဒီခါးသီးတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ဒေါသက ရှောင်လွှဲလို့မရ ဖြစ်လာပြီး တစ်ဘက်ကို ရန်ပြုလိုပြီး ဒေါသနဲ့ အတူ အထင်သေးတာပါ တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
အဲဒီလိုလက်တွဲဖော်က မိမိကိုစာနာမှုမရှိ၊ အထင်အမြင်သေးတာကို ခံစားလာရတဲ့ခါမှာ ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲက adrenalin ဆိုတဲ့ ﻿ဟော်မုန်းက စိတ်လှုပ်တဲ့အခါတိုင်း ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီဟော်မုန်း ကပဲမိမိရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ဆွဲချသလို ဖြစ်လာပါတယ်၊ အခုလို အကြင်နာမေတ္တာနဲ့ စာနာမှုမရှိတာ တွေက တစ်ဦးကနေတစ်ဦး အပြန်အလှန်ကူးစက်သလို ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ ရှိတဲ့သူနဲ့ တိုင်ပင်ရင်၊ ရင်ဖွင့်ရင်၊ ကိုယ့်မှာ နဂိုရှိတဲ့ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာတွေက ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ တကယ်လို့များ အခုလို ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာ အထင်အမြင် သေးတက်တဲ့ လူနားမှာ မိမိကရှိနေရင် တိုင်ပင်ဖြစ်ရင် အထင်သေးသွားပါလေရော။
ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ မိမိကပဲ လက်တွဲဖော်ရဲ့ တန်ဘိုးကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ မိမိကပဲ ဖြေရှင်းရမှာပါ။ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ကိုယ့်မေတ္တာကို အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့သူ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်တဲ့သူ၊ အတ္တသမား၊ မရိုးသားတဲ့သူ၊ ယုတ္တိမရှိ ပြောတတ်သူ စသဖြင့် အဲဒီလို အတွေးတွေနဲ့ အထင်သေးလာ တတ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက သူမဟုတ်သလိုပဲ ဆိုပြီးလည်း တွေးလာတတ်ပါ တယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ စုံတွဲတွေအနေနဲ့ ဒီလိုခါးသီးတဲ့ ခံစားချက်၊ ဒေါသဒေါ်သတွေကို ရပ်တန်းကရပ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ နဂိုအမူအကျင့်တွေကို မြှင့်တင်ပါ။ နှစ်ဘက်စလုံးရဲ့ ပျော့ကွက်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေကို လျော့ချပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပြန်ဆွေးနွေးရင် မကောင်းဘူးလား တရားမျှတ တယ်၊ မမျှတဘူး သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ ရန်ပြုနေကြမဲ့အစား အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းပြပြီး ဒီဆိုးတဲ့အပြုအမူတွေ အကျင့်တွေကို ပြင်လိုက်ကြရအောင်ပါ ခုဆိုရင်တော့ မိမိကိုယ်မိမိ ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဒီခါးသီးတဲ့ ခံစားချက်တွေ စာနာထောက်ထားမှု မရှိတဲ့ အမူအကျင့်တွေက အလိုအလျောက် မိမိက ပြုကျင့်တတ်လာပါလိမ့်မယ်။ အကျင့်ပါသွားတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ ဒီအမူအကျင့်တွေက မိမိရဲ့ တန်ဘိုးကို လျော့စေပါတယ်။ အရင်တုန်းက ပုံစံမဟုတ်သလို တစ်ဘက်က ထင်လာတတ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Close relationship မဖြစ်နိုင် တော့တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဒေါသဆိုတာ Relationship မှာ ရှိနေဖြစ်နေအုံးမှာပေမယ့် စာနာထောက်ထားမှု ကို focus လုပ်ကြရင်ဖြင့် ဒေါသဆိုတာ အလိုလို လျော့ပါးလာပြီး တစ်ဖြည်းဖြည်း တိမ်မြုပ်သွားမှာ ပါဆိုတာ တင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
#Family #rvapastoralcare #Relationship
လက်ထပ်တော့မဲ့ မိန်းကလေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
မိဘ တယောက် ဖြစ်ဖို့